Wayne Rooneey oo ka fariistay Cayaaraha Caalamiga ah+Sawiro | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Wayne Rooneey oo ka fariistay Cayaaraha Caalamiga ah+Sawiro
(23-8-2017) Cayaaryaahnka kooxda kubada Cagta Everton Wayne Rooneey ayaa ku dhawaaqay in uu gebi ahaan ka fariistay Cayaaraha Caalamiga ah kadib markii uu ka Rajo dhigay in markale loogu yeero Xuka dalkiisa.
Wayne Rooneey oo ah hadda 31 Sano jir ayaa rasmiyan ugu dhawaaqay in uu gebi ahaan soo gaba gabeeyey Cayaaraha Caalamiga ah isla Markaana uusan markale u Cayaari doonin Xulka dalka England.
Rooneey oo dhawaan ku biirey kooxda Everton ayaa 2 Gool dhaliyey 2 Cayaarood oo uu u cayaaray kooxdiisa Xiligaan waxaana Macalinka Three Lions Gareth Southgate dhawaan laga soo xigtay in uusan ugu yeeri doonin Xulkiisa markale Wayne Rooneey oo haysta Recordka Goolasha ee Cayaartoyda dalka England.
Xiddigaan ayaa qaranka dalkiisa u saftay 119 Kulan isaga oo u dhaliyey 53 kulan Waxaana uu katirsanaa mudo 14 Sano ah balse Maanta ayuu sirasmi ah ugu dhawaaqay in uu gebi haan soo gaba gabeeyey Cayaarihiixulka dalka England.
Cayaartoyda ugu Goolasha badan England?